Chitatu 7 Chikunguru 2021
Yekuisira Topography Fenicha Huru Kufanana neBako Iyi ndiyo yakahwina mubayiro chirongwa chakahwina Grand Prize yeArt muContainer International Competition. Pfungwa yangu ndeyekuzevha vhoriyamu mukati mebhaketi kuitira kuti ivake nzvimbo dzakakura kunge bako. Iyo yakagadzirwa neyepurasitiki chete. Anenge zviuru zvishanu zvemapurasitiki akapfava evhu hwakadzika-gumi-mm hwakatemwa munzira ye contour mutsara uye wakasimudzwa senge stratum. Iyi haisiri hunyanzvi chete asiwo fenicha hombe. Nekuti zvikamu zvese zvakapfava senge sofa, uye munhu anopinda mune ino nzvimbo anogona kuzorora nekuwana iyo nzvimbo yakakodzera chimiro chechayo muviri.
Khalenda Guta ipepa rekugadzira mapepa rine zvikamu zvinogona kuunganidzwa zvakasununguka kuva khalenda. Isa pamwechete zvivakwa mumhando dzakasiyana uye unakirwe kugadzira rako rako diki guta. Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvine simba rekugadzirisa nzvimbo uye kushandura pfungwa dzevashandisi vayo. Vanopa kunyaradza kwekuona, kubata uye kushandisa. Ivo vanozadzwa neakareruka uye chinhu chekushamisika, inovandudza nzvimbo. Zvigadzirwa zvedu zvepakutanga zvakagadzirwa zvichishandisa pfungwa yeUpenyu neKugadzira.
Muvhuro 5 Chikunguru 2021
Kalendari Iyo YePepa mapepa ekunyora kit iri nyore kuungana. Hapana glue kana scissors inodiwa. Unganai nekukodzera pamwe chete zvikamu zvine mucherechedzo mumwe chete. Imwe neimwe mhuka ichave iyo mwedzi miviri yekarenda. Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvine simba rekugadzirisa nzvimbo uye kushandura pfungwa dzevashandisi vayo. Vanopa kunyaradza kwekuona, kubata uye kushandisa. Ivo vanozadzwa neakareruka uye chinhu chekushamisika, inovandudza nzvimbo. Zvigadzirwa zvedu zvepakutanga zvakagadzirwa zvichishandisa pfungwa yeUpenyu neKugadzira.
Svondo 4 Chikunguru 2021
Mugovera 3 Chikunguru 2021
Khalenda Iyo khalenda yemakambani inogona kuunza rakawanda bhizinesi kuThai maresitorendi emunharaunda mune upcountry? Zvakadii nekugadzira kwakawanda kubatirana nekendari uchishandisa QR Code sekuona mavhidhiyo e'Chakavanzika Recipe 'yemasaini masaini ezvekudya zvegumi nevaviri zveThai. Zvikamu zvacho zvichaiswa paSocial Network nzvimbo kuti zvive nyore kugovana. Mamwe mawonero anozobatsira maresitoreti kuti azivikanwe zviri nani uye zvinogona kutungamira kutengesa kwakawanda. Nekuda kweizvozvo, vemabhizimusi emunharaunda vanogona kumira vega, vachimhanyisa bhizinesi ravo rakasarudzwa, vasingafanire kubva munharaunda mavanogara.
Chishanu 2 Chikunguru 2021
Kadhi Meseji Mashizha makadhi emharidzo ane pop-up mashizha emuti. Vhenekera mameseji ako neinobata kubata kweakasvibira yemwaka. Inouya mune seti yemakadhi mana akasiyana ane maenvuropu mana. Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvine simba rekugadzirisa nzvimbo uye kushandura pfungwa dzevashandisi vayo. Vanopa kunyaradza kwekuona, kubata uye kushandisa. Ivo vanozadzwa neakareruka uye chinhu chekushamisika, inovandudza nzvimbo. Zvigadzirwa zvedu zvepakutanga zvakagadzirwa zvichishandisa pfungwa yeUpenyu neKugadzira.
Only Right Here Akabata Banga Chishanu 17 Gunyana
180º North East Riini China 16 Gunyana
Ballo Chinotakurika Mutauri Chitatu 15 Gunyana
Yekuisira Topography Khalenda Kalendari Kalendari Khalenda Kadhi Meseji